Home » Activities of Departments » Exp Dep
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှသွားမည့် မြန်မာ့ တာယာ
ပည်တွင်းတွင်ပေါများစွာထွက်ရှိပြီး ပြည်ပသို့ ကုန်ကြမ်းအတိုင်း တင်ပို့လျှက်ရှိသော မြန်မာ့ရာဘာ ကုန်ကြမ်းများအား အသုံးပြု ပြီး ပြည်တွင်းစက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်ထားသည့် Yangon Tyre (7.00-16)(12PR) တစ်လုံးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(75)ဖြင့် တာရာ(350)လုံးအား မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တင်ပို့ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပို့ကုန်လိုင်စင်လာရောက် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်..တာယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတရရှိကြစေရန် အတွက် အဆိုပါကုမ္ပဏီအား မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်-
(က) Section01 ( Rubber Compounding Section)= ကုန်ကြမ်းရာဘာများနှင့်ဓါတုပစ္စည်းများအား အချိုးကျရောစပ်ပြီး ပေါင်းစပ်သွားအောင်ပေါင်းခြင်း။
(ခ) Section02 ( Nylon Cord Rubberising Section)= အထက်ပါပေါင်းပြီးထွက်ရှိလာသောပစ္စည်း များအား နိုင်လွန်ပေါ်တွင်(12PR/14PR/16PR) စသည်ဖြင့်ရရှိအောင် အထပ်လိုက်ခင်းခြင်း။
(ဂ) Section03 ( Rubber Tread Extrusion Section)= တာယာပေါ်တွင်ပါရှိသော ပန်းသားဖေါ်ခြင်း၊ မြောင်းဖေါ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဃ) Section04 ( BEAD Section)= Section02 မှထွက်ရှိလာသောပစ္စည်းများအားတာယာနှုတ်ခမ်း သား(စတီး/ကြေး)များထည့်ခြင်း။
(င) Section05 ( BIAS CUTTING Section)=Section04မှထွက်ရှိလာသောပစ္စည်းများအား တာယာ(1)လုံးစာ ရရှိ အောင် တာယာအရွယ်အစားအလိုက် အထပ်လိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း။
(စ) Section06 ( Tyre Building Section)= Section05 မှထွက်ရှိလာသောပစ္စည်းများအားတာယာ ပုံစံ ဖြစ်အောင်(တာယာစိမ်း)ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဆ) Section07 ( Tyre Curing Section)= တာယာစိမ်းကို ပေါင်းခြင်း ။
(ဇ) Finished Product Tyre = ပေါင်းစက်မှထွက်ရှိလာသော တာယာများမှ မလိုအပ်ဘဲထွက်ရှိနေ သော အမျှင်စများဖြတ်တောက်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊လေထိုးပြီးစမ်းသပ်ခြင်း၊ မိုထဲထည့်ပြီးပုံဖော်ခြင်း။
(ဈ) Tyre Inspection = ထွက်ရှိလာသော တာယာများ၏ အရည်အသွေးများအားစစ်ဆေးခြင်း။
(ည) Packing = အရည်အသွေးပြည့်မီသော တာယာများအား အမျိုးအစားအလိုက်ထုတ်ပိုးခြင်း။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်သားအင်အား(200)ကျော်အသုံးပြုပြီး ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် တစ်ရက်လျှင် အလုပ်ဆိုင်းနှစ်ဆိုင်းဖြင့် (16)နာရီလျှင် တာရာအလုံးရေ(100)ခန့် ထုတ်လုပ်ဆောင် ရွက်လျှက်ရှိပြီး ကုန်ကြမ်းရာဘာအနေဖြင့် တာယာတစ်လုံးလျှင်(6.3054) Kg အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ရာဘာကုန်ကြမ်းတန်ချိန်(0.63)တန် နေ့စဉ်အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်… ဒီလိုမျိုး ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ရာဘာဈေးကွက်မှာ အရည်အသွေး မကောင်းလို့ ဈေးနှုန်းအနိမ့်နဲ့ရောင်းချနေရတဲ့မြန်မာ့ရာဘာကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်… ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာဘဲ ဈေးကောင်းရရှိလာမဲ့အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်..
ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက် ရေးအတွက် ဦးတည်ပြီး အားပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေချိန်တွင် ပြည်တွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအား အသုံးပြုပြီး ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသော တန်ဖိုးမြှင့် ကုန်ချောပစ္စည်းဖြစ်သည့် Yangon Tyre ပြည်ပတင်ပို့မည့်သတင်းကောင်းအားမျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်ခင်ဗျာ…..
Exp- mg mg lwin
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ သွားမည့် မြန်မာ့သာကူစေ့
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ သွားမည့် မြန်မာ့သာကူစေ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွက်ရှိသော ပီလောပီနံဥအမှုန့်ဖြင့် တန်ဖိုးမြှင့် ကုန်ချောပစ္စည်းအဖြစ် ပြုလုပ်ထားသည့် မြန်မာ့ သာကူစေ့၊ ကုန်သွယ်မှုအခေါ် (Tapioca ) (30)တန်အား တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(730)ဈေးနှုန်းဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရန်အတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင် လာရောက်လျှောက်ထား ထုတ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်..... သာကူစေ့အား အစားအစာအဖြစ်ပြုလုပ် စားသုံး ကြောင်းသိရှိရပါတယ်…… ပီလောပီနံဥအမှုန့်အား ကုန်ကြမ်းအတိုင်း တင်ပို့ မည် ဆိုပါက တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (300-320) ခန့်သာ ရရှိကြာင်း သိရှိရပြီး ယခုကဲ့သို့ကုန်ချောအဖြစ်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်တင်ပို့ခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေသိသာစွာတိုးမြှင့်ရရှိ ခြင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်များလာခြင်း၊စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအကျိုး အမြတ်ပိုမိုရရှိလာခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိလာနိုင် မည်ဖြစ်သဖြင့် အမယ်သစ်တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ချောပစ္စည်းများ ပိုမိုတိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေး ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွား နိုင်ကြစေဖို့ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါ တယ်ခင်ဗျာ………. Export mg mg lwin
“ အို ... ငါးကြင်းတွေဆန် . . . . ငါးတန်တွေ .... သောင်ခြေဦးမှာလ . . . . အိုတံငါ . . . လှေယာဉ်စီးပါ လို့ . . . ပိုက်ကြီးကို . . . . ရေချလာ . . . . “ ဟိုအဝေး ထင်းကုန်ရွာလေးရှိ အသံချဲ့စက်မှ သီချင်းသံသဲ့သဲ့လေးကို ကြားနေရသည်။ စစ်တောင်းမြစ်ရေက ကြည်လင် ပြန့်ပြူး၍ သင်ဖြူးခင်းထားသကဲ့သို့ ရှိနေသည်။ အရှေ့ဆီမှ ပေါင်းလောင်းတောင်တန်းက မြစ်ပြင်ပေါ်ဝယ် အရိပ်ထင်နေသည်။ မြန်မာ့ပြက္ခဒိန် လဖြင့် လစဉ်(၈)ရက်နေ့များတွင် ရေက စင်းစင်းသေသည်။ ရေတက်ရေကျလုံးဝမရှိခြင်းကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ် သည်။ ယခုလိုရေနုထ သည့် ရက်(၁၂ - ၁၃)ရက်များမှစ၍ ငါးတွေဖမ်းမိတတ်သည်။ ရေထရက် များတွင် ရေက တစ်နေ့(၂)ကြိမ် တက်ပြီး မြန်မာရက် (၂-၃) ရက်နေ့များတွင် ရေအမြင့်ဆုံးတက်ရာ ခေါင်ရေ ဟုခေါ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းခြင်း သဘောရှိသော ရေတို့သည် ပင်လယ်ဝမှနေ၍ မြစ်အတွင်း မြင်းပြေးသကဲ့သို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့် ပြောင်းပြန် စီးဝင် လာကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရေလုံးကြီးက ဦးဆောင်ကာ တဝေါဝေါ မြည်သံတို့နှင့်အတူ အလွန်လျှင်မြန်သောအရှိန်ဖြင့် မြစ်အတွင်းသို့ စီးဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတံငါသည်တို့က ဒီရေတက်သည်ဟုခေါ်သည်။ မြစ်အတွင်းရှိရေတို့သည် လည်း ဆားငံရေတို့ဖြင့် ငန်ငြိငြိ ဖြစ်ကုန်တော့သည်။ ဒီရေတက်ချိန်တွင် ကျယ်ပြန့်သော သောင်ပြင်ကြီးများပေါ်သို့ ဒီရေက ဝရုန်းသုန်းကား ပြေးတက်သွားပြီးဒီပြန်ချိန် နေရောင်အောက် သဲသောင်ပြင်တွင် တင်ကျန် ခဲ့ရှာသော ငွေရောင် တောက်ပနေသော ငါးကလေးတို့က ခုန်ဆွခုန်ဆွနှင့် ခုန်ကသလို ဖြစ်နေ သည်မှာ ကပွဲတစ်ခုကြည့်ရ သလိုပင်၊ အချိန်နှင့် ဒီရေကို မခန့်မှန်းနိုင်သော တံငါသည်မျောက် တို့က ငုတ်တုတ်မိပြီး ဒီရေအောက်မှာ အသက်ဆုံးရှုံးရသလို သတိပေါ့လျော့သော တံငါသည် တို့သည်လည်း တံငါသည်လှေ ရေမှာနစ်ကာ ဒီရေနှင့်အတူ ပစ္စည်းရောလူပါ ဆုံးရှုံးတတ် ကြသည်။ ဒီရေတက်ခြင်းသည် ပါးစပ်ရာဇဝင် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်အရ အသကုမ္မာရ မင်းသားနှင့် ဒီရေစောင့် နတ်သမီးတို့၏ ချစ်ပုံပြင်နှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု သိရှိခဲ့ရသော်လည်း သိပ္ပံနည်းအရ “လ၏ဆွဲငင်အားကြောင့်“ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ထိုအချိန်တွင် ငါးပိအိုးကြီးများ အတွင်းရှိ ငံပြာရည်တို့ မှာလည်း လျှံထွက် လာကြသည်။ ပိုက်ချက်၏ အလယ်လှေပေါ်မှနေ၍ တံငါသည် ရေပြင်ပေါ်ဝယ် စီတန်း၍ ပေါ်နေသာ ပလပ်စတစ် ဘော့နက် နက်လေးတွေကို မုဆိုးချောင်းလေးလိုက်ကြည့်နေသည်။ တံငါသည် မျက်လုံးတစ်ချက် ဝေ့ကြည့်လိုက် ချိန်မှာတော့ ပိုက်ဘော့နက်နက်ကလေး တစ်လုံးက ခပ်ဆတ်ဆတ် နိမ့်ချည်ပေါ်ချည် အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသည်။ တံငါသည် လှေကို အသာအယာလှော်ကာ ပိုက်ဘော့လေးကို ဖြည်းညင်းစွာ ဆွဲကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ဝင်းထိန်သွား သည်။ ဧကန်အမှန် ငါးတစ်ကောင်က ရေထဲရှိ ပိုက်ထဲတွင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုးနေလေခြင်းဖြစ်သည်။ တံငါသည် ပိုက်ကို လျှော့ချည်တစ်ခါ တင်းချည်တစ်လှည့် တဖြည်းဖြည်း ဆွဲတင်လိုက်ရာ ပါးစပ်မှ “အား“ ဟူသော အာမေဋိတ်သံနှင့် အတူ (၁)ပိဿာကျော် ကျော်ခန့်ရှိ ငါးသလောက်ကြီး တစ်ကောင်၊ ဒီနေ့ ငါးသလောက် ပေါက်ဈေး တစ်ပိဿာ ကျပ် ၈၀၀၀ိ/- ကျော် ဈေးနှင့် ဆိုရင်တော့ တံငါသည် အတွေးရေယာဉ်ကြောမှာ ခေတ္တမျောပါပြီး သဘာဝ တရားကြီးရယ် ကျေးဇူးပါဘဲ လို့ မုဒိတာပွားလိုက်မိသည်။ တံငါသည် ရေယာဉ်ကြောမှာ လှေယာဉ်ကလေးစီးပြီး အတွေးစိတ်ကူးတို့ ဖြန့်ကျက်ကွန့် မြူးနေရင်းက လှေပေါ် တွင် ပါလာသော မနေ့က သတင်းစာလေးကို လှန်လှော ဖတ်ကြည့်လိုက်ရာ ရေအရင်းအမြစ်မှ ငါးသလောက်များကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ မုတ္တမပင်လယ် ကွေ့စသည့်ဒေသများတွင်သာ ပေါက်ဖွားလေ့ရှိပြီး ဖမ်းယူရရှိနိုင်ကြောင်း ၊ ငါးသလောက်မျိုးစိတ်တွင် ငါးသလောက်နှင့် ငါးသလောက်ယောက်ဖ ငါးမျိုးစိတ်နှစ်မျိုးရှိကြောင်း၊ ငါးသလောက်သည် ပြည်ပပို့ကုန် အဖြစ် ငါးကြင်းပြီးလျှင် ဒုတိယတင်ပု့ိမှု အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် ငါးအမျိုးအစား များထဲတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှားပါးအဖိုးတန်သည့် ငါးသလောက်မျိုးစိတ် များ မပျောက်ပျက်စေရန် ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းသွားရန် လိုကြောင်း စသည်တို့ကို ဖတ်ရှုလိုက်ရသောအခါ အမှန်ပင် သဘာဝ သယံဇာတများကို နည်းမျိုးစုံနှင့် ဖမ်းဆီးနေသဖြင့် ငါးသလောက်များ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ဖမ်းဆီးရရှိမှု လျော့နည်းလာပြီး ငါးဈေးနှုန်းကလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် မြင့်တက် လာသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖိုးတန် ရှားပါးသည့် ငါးသလောက်မျိုးစိတ်များ မပျောက်ပျက် စေရန် မည်ကဲ့သို့ ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြမည်နည်း။ ငါးမျိုးစိတ်အားလုံး မပျောက်ပျက်ဘဲ ရေရှည်ထုတ်ယူစားသုံးနိုင်ရန် တစ်ဦးတစ်ယောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မစွမ်းဆောင် နိုင်ရာ အင်းတံငါ(ခေါ်)ကုန်းတံငါ၊ မြစ်တံငါ၊ ပင်လယ်တံငါ ငါးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုနေကြသည့် တံငါသည်အားလုံး ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရမည်။ ရေသယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် အမျိုးသားတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိကြသော အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တို့က ကျေးရွာများ အရောက် အသိပညာပေးဟောပြောစည်းရုံး ဆောင်ရွက်သွားကြလျှင် ကောင်းလေစွဟု တွေးနေမိသည်။ ယခင်က တံငါသည်လေးတို့ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ရေအတက်အကျ၊ အချိန်အခါ တို့ကို ကောင်းကင်ရှိ နေ၊ လ နှင့် ကြယ်နက္ခတ်တာရာ တု့ိကိုကြည့်၍ လည်းကောင်း၊ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းက အုံးမောင်း ခေါက်သံ၊ ကြက်တွန်သံတို့ကို လည်းကောင်း နားထောင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် Galobalization ခေါ် ရွာကြီး တစ်ရွာသဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်၍ လာချင်ရင်အနီးလေး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အရာအားလုံးက မဝေးတော့ပြီ။ ထို့ကြောင့် ခါးကြားတွင် ချိတ်ထားသော ဖုန်းကလေးကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ ငါးသလောက် တင်ပို့မှု အခြေအနေမှာ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တန်ချိန်(၆၀၀၀)ကျော်ခန့်၊ တန်ဘိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၀)သိန်းခန့်၊ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် တန်ချိန် (၁၄၀၀၀)ကျော်ခန့်၊ တန်ဘိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၃၈) သိန်းကို တင်ပို့ခဲ့သည်။ တင်ပို့ခဲ့သည့် နိုင်ငံများမှာ သြစတြေးလျ၊ ဘာရိန်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘရာဇီး၊ ဘရူနိုင်းဒါရုစလင်၊ ဘူဂေးရီးယား၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ အီတလီ၊ ဂျာမန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ကူဝိတ်၊ မလေးရှား၊ မြောက် အိုင်ယာလန်၊ ကာတာ၊ ဆော်ဒီအာရေးဗျ၊ စင်္ကာပူ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ တန်ဇန်နီးယား၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘရာဇီး၊ ဂျော်ဒန်၊ ပါကစ္စတန်၊ တောင်အာဖရိက၊ စပိန်၊ ဆွီဒင် စသည့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံ အများအပြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ငါးသလောက် တင်ပို့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကာလတူ နှိုင်းယှဉ်သည့် အခါတွင် တင်ပို့သည့် အရေအတွက် (၁)ဆကျော် တိုးတက်ခဲ့ပြီး တန်ဘိုးမှာ (၄)ဆနီးပါးမြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ တံငါသည်တို့၏ စာဆိုအရ “ပြာသိုလမိုက်ငါးဦးဆိုက်“ ဆိုသလို နတ်တော် ၊ ပြာသိုလ ဒီရေတက်ချိန် များတွင် ငါးသလောက် အများဆုံး ဖမ်းဆီးရရှိချိန်ဖြစ်သည်။ စစ်တောင်းမြစ်ဝရှိ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မျောပိုက် တံငါသည်လေးတို့ ပင်လယ်ဝထွက်ကာ ငါးဖမ်းဝမ်းစာရှာကြသည်မှာ ငါးဖမ်းသူ ၊ ငါးဝယ်သူနှင့် ဈေးရောင်း စက်လှေငယ်များဖြင့် ဝမ်းရေးအတွက် နေ့မအား ညမအား ဆောင်ရွက်နေကြသည်မှာ ရှုပ်ယှက်ခတ်ကာ နေတော့သည်။ သည်အချိန် ဆောင်းလေကအေးအေး ၊ နှင်းဖွေးဖွေးတွင် ခဝဲ၊ သဇင်၊ ခွာညို ရာသီပန်းတို့က မွှေးထုံသင်းပျံ့ ပွင့်လန်းသည့်အချိန်၊ အသဲခိုက်တုန်အောင်ချမ်းအေးသော ဟေမန္တဆောင်းရာသီ အခါသမယ တွင်တော့ တံငါသည်တို့၏ လှေပေါ်တွင် ဥဖောင်းဖောင်းနှင့် ငွေရောင်ထနေသော ငါးသလောက်တို့က ငွေတောင်ကြီးပုံထားသကဲ့သို့ ရှိနေချေတော့မည်ဟု စိတ်ကူးများဖြင့် ကြိတ်မြူးကာ လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား ရပေတော့မည်။ နေမင်းကြီးက အနောက်ဘက်ရှိ ဂေါယာကျွန်းသို့ ယွန်းလုပြီ ၊ ဆည်းဆာချိန် တိမ်တောက်က ရိုးမတောင်စွယ် ပေါ် မေးတင်ပြီး သြကာသလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို အရောင် အသွေး စုံလင်စွာဖြင့် လှပစွာဖန်ဆင်းထားသည်။ လေပြေလေညှင်း လေးတို့က ခပ်ပြင်းပြင်း တိုးဝှေ့လာပြီး လှိုင်းအိလေးတွေက ဖွေးဖွေးလှုပ်လာသည်။ ရွာဦးထိပ်ရှိ ထုံးဖြူဖြူစေတီလေးကို အဝေးမှ ခပ်ပျပျ လှမ်းမြင်နေရပြီး ကုန်းအထက်ဆီမှ ထွန်ယက်နေသော ယာ/ကိုင်းသမားတို့၏ သီချင်းသံ ၊ နွားမောင်းသံ၊ အော်ဟစ်သံတို့က ဝေစည်နေသည်။ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ အတွက် တစ်နေ့တာ ပြီးဆုံးပြီမို့၊ လှေဦးကို ရွာဘက်ဆီသို့ လှည့်လိုက်ကာ ရွက်တိုင်ကို ထောင် လိုက်သည်။ တက်မကိုချိတ်ရင်း မဝေးတော့သည့် လှေဦး စိုတော့မည့် ကာလကို တွေးပျော်ရင်း လိုက်ပါလာသည်။ မျှောပိုက်တံငါသည်တို့သည် မိုးရာသီမြစ်ရေလျှံတက်ချိန်တွင် တံငါသည်တ ဖက် လယ်သမား တဖက်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသည်။ မိမိ ပိုင်လယ်မြေ (၂) ဧကခန့်ကို တတ်သိနားလည် လေ့လာထားသမျှ နည်းပညာတို့ဖြင့် အထွက်တိုးအောင် စိုက် ပျိုးထားသည်။ စပါးတင်း (၁၀၀) ကျော်ခန့် ထွက်ရှိမည်။ နွေရာသီ အတွက် ဆန်၊ ထင်းတို့ ဖူလုံပြီး ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ပဲသီးထပ်လေးစိုက်ပျိုးမည်။ မယုံသော် လည်း ကိုယ့်အတွက်တော့ စိတ်ဖြေနိုင်အောင် မိုးအကုန်လှေ အဆင်းမှာ ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီး အား ပူဇော်ပသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်က ဝါကြီး(၂)ခါထပ်သည့်နှစ်မို့ ငါးမျိုးစုံတို့ ပေါများလေ့ ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သဘာဝတရားကပေးထားသော ရေသယံဇာတ အရင်းအမြစ် ငါးလုပ်ငန်းသည် ပြည်သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးပြီး ပြည်သူတို့ အကျိုးစီးပွားသာမက အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါ ဆောင်ကြဉ်းပေး နေပြီ၊ ယခုအခါ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကို ဖြေလျော့လိုက်ပြီဖြစ်၍ ပွင့်လန်းလာသော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်သမျှသော ကုန်ထုတ် အရင်းအနှီးတို့ကို နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မယားမှာဆံတောက် ၊ ငါးမှာငါးသလောက် ဆိုသကဲ့သို့ အရသာနှင့် အရည် အသွေးပြည့်ဝ ကောင်းမွန်လှသော မြန်မာ့ငါးသလောက်တို့က နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် ကြိုက်ဈေးဖြင့် ခေါင်းခေါက် ရောင်းချနိုင် တော့မည် ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်နွေ လှေဦးစိုရင်တော့ဖြင့် ပိုလျှံမည့် ငွေလေး တွေကို Flat TV တစ်လုံး ၊ Microphone ၊ Sound Box တွေဝယ်ပြီး နေ့စဉ် ပန်းအမျှ ၊ နွမ်းသမျှ၊ လွမ်းသမျှတွေကို အဆိုတော် တွံတေးသိန်းတန်၏ “နှမလက်လျော့နေလေတော့“ သီချင်းလေးကိုဖြင့် အားရပါးရ ဟစ်ဆိုလိုက်မည်ဟု ကြုံဝါးရင်း လှေကို ဝုံးကနဲ တအား ကြုံးလှော်လိုက်ပေတော့သတည်း။ (ထွန်းမြင့်ထွန်း)
ရေမြေခြားလည်းရောက်အောင်သွားမည့် ခရမ်းသီးနှင့် ပဲပုစွန်သီး
ခရမ်းသီးဆိုလျှင် မြန်မာအိမ်ရှင်မတို့ စားဖိုချောင်တွင် နေ့စဉ်မိသားစု စားသောက်ရေးအတွက် ဗီတာမင်ဓာတ် အားဖြည့်အသီးအနှံများအနက်အဓိကသုံးစွဲသော အမာခံဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းသီး ကို မြန်မာတို့၏ မိသားစုစားသောက်ဝိုင်းများနှင့် အလှူမင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများ၌ သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်ရာတွင် မပါမဖြစ် အဓိကစားသုံးသည့်သီးနှံလည်းဖြစ်ပြီး ခရမ်းသီးတစ်မျိုးတည်း ကြက်သွန်ဖြူနှင့် နှပ်၍ ချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်း၊ပုစွန်ခြောက်၊ငါးခြောက်အမျိုးမျိုးတို့နှင့်ရောနှောချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်း၊ အခြား မည့်သည့် အသား၊ငါးများနှင့်မဆို ရောနှောချက်ပြုတ်စားသောက်လျှင် အရသာရှိရှိနှင့် ထမင်းမိန်မိန် စားသုံးနိုင်ရန် အဓိကဖြည့်စွက်ပေးသော ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ခရမ်းသီးတွင် အတောင့်အရှည် အမျိုးအစားနှင့် အလုံးအဝိုင်းအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပြီး အလုံးအဝိုင်းကို မီးဖုတ်၍ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန် မြိတ်၊နံနံပင်၊မြေပဲ၊ နှမ်း တို့ဖြင့် ရောနှောပြီး သုတ်၍ မိသားစုထမင်းစားသောက်ဝိုင်းများတွင် အဓိက ဟင်းလျာတစ်မျိုး အဖြစ် စားသုံးကြပါတယ်။ ထိုအတူ ပဲပုစွန်သီးကိုလည်းမြန်မာစားဖိုချောင်များတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြသည် ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ချဉ်ရည်ဟင်းချက်၍ စားသုံးခြင်းအပြင် ပဲပုစွန်သီးကို ရေနွေးဖြင့်ပြုတ်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ မြေ ပဲဆံအမှုန့်တို့ဖြင့် ရောနှောပြီး သုတ်၍စားသုံးပါကလည်း အလွန်နှစ်ခြိုက်ဖွယ် ကောင်းလှပါ တယ်။ ပဲပုစွန်သီးကို ကျေးလက်ဒေသများတွင် “ မောင်မခွာသီး“ ဟုခေါ်ဆိုကြောင်းလည်း လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ ပဲပုစွန်သီးစားကောင်းလို့ မောင်ကြီးတောင်မခွာနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ပဲပုစွန်သီးကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေရာဒေသမရွေး စိုက်ပျိုးထွက်ရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးရာတွင်လည်း စရိတ်စကအကုန်အကျခံစိုက်ပျိုးစရာမလိုဘဲ ကျေးလက်ဒေသများရှိအိမ်ခြံဝင်းများတွင် လွယ်လွယ်ကူကူ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိသောအသီးအနှံဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေအထောက်အကူ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုအရသာရှိလူကြိုက်များလှတဲ့ ခရမ်းသီးနှင့် ပဲပုစွန်သီးကို ပြည်တွင်း၌စားသုံးကြသည်သာမက ပြည်ပသို့ပင် တင်ပို့ရောင်းချနေပြီဖြစ်ရာ နိုင်ငံတော်အတွက် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထဲတွင် ပြည်တွင်းကုမဏီတစ်ခုမှ မြန်မာ့ခရမ်းသီးနှင့် ပဲပုစွန်သီးများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ပို့ကုန်လိုင်စင် လာရောက်လျှောက်ထားသည်ကို သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန် စားဖိုချောင်သုံး သီးနှံများကို နိုင်ငံတကာက လူကြိုက်များပြီး အသိအမှတ်ပြု ဝယ်ယူလာကြပြီဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူများအတွက် ရော နိုင်ငံတော်အတွက်ပါ ဝင်ငွေရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းသီးကို မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းနေရာဒေသ မရွေး စိုက်ပျိုးထွက်ရှိပါတယ်။ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးဆိုသည့် မြန်မာ့ဆိုရိုးအတိုင်း ခရမ်းသီးကို မည့်သည့်မြေအမျိုးအစားတွင်မဆို ပေါက်ရောက် ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့် သီးနှံတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူများ အနေဖြင့် မြေလွတ် မြေလပ် မကျန် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါက စားဝတ်နေရေးများ ပြေလည် စေမည့်အပြင် လူမှုဘဝများလည်း တိုးတက်မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ရေးသား တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ သန်းအုံး(DOT)
ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားမည့် ကိုရီးယားနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် မြန်မာ့နှမ်းလှော်ဆီမွှေး
ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ ယခင်က နှမ်းနက်နှင့်နှမ်းဖြူမှလွဲ၍ ဆီကြိတ်ရာတွင်အသုံးပြုသော နှမ်းနီ၊ နှမ်းညိုနှင့် နှမ်းဆီတို့အား တင်ပို့ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ရာမှ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၉)ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၂ ဖြင့် နှမ်းနီ၊ နှမ်းညို၊ နှမ်းဆီတို့နှင့် မြေပဲ၊ မြေပဲဆီတို့အား ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပြုခဲ့ သဖြင့် နှမ်းစိုက်တောင်သူများ အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြကြောင်းနှင့် မြေပဲနှင့်နှမ်းများဈေးကောင်းရရှိနေသဖြင့် တောင် သူများအနေဖြင့် စိုက်ဧကများတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်……
ယခုအခါ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ကိုရီးုယားနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော မြန်မာ့နှမ်းလှော်ဆီမွှေးအား ဂျပန်နိုင်ငံ သို့တင်ပို့ရန်အတွက် တန်(၃၀)အား တစ်တန်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃၅၀၀)ကျော်ဖြင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်လာရောက် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့မြန်မာ့နှမ်းများအား ကုန်ကြမ်းအတိုင်း တင်ပို့လျှက်ရှိရာမှနေ၍ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှစက်ပစ္စည်းများမှာယူတင်သွင်းခဲ့ပြီး ကိုရီးယားနည်းပညာဖြင့် တန်ဖိုးမြှင့်ကုန် ချောပစ္စည်းများအဖြစ် နှမ်းလှော်ဆီမွှေးထုတ်လုပ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ရန်အတွက် စတင်ဆောင်ရွက်လာခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နှမ်းလှော်ဆီမွှေးကို အသီးအရွက်များသုပ်စားရာတွင် အမွှေးဆီအဖြစ် အနည်းငယ်သာခပ်၍အသုံး ပြုကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ နှမ်းလှော်ဆီမွှေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ နှမ်းကုန်ကြမ်းပေါ်တွင် နှမ်းလှော်ဆီမွှေး(၄၀)ရာ ခိုင်နှုန်းခန့်ထွက်ရှိကြောင်းနဲ့ စက်အလုံး(၃၀)မှာ လုပ်သားအင်အား(၃၀)အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး နှမ်းလှော်ဆီ တစ်တန်ခန့်ထွက်ရှိရန် (၁၀)နာရီကြာကြိတ်ရကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ နှမ်းကုန်ကြမ်းအ တိုင်းတင်သွင်းရင် ပိုးမွှားရောဂါပါမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက် အခွန်တိုးမြှင့်ထားပြီး နှမ်းလှော်မှုန့်တင်သွင်းရင်တော့ အခွန်ကင်း လွတ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဘေးထွက်ပစ္စည်းအနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့နှမ်းဖတ်မှာလည်း လူတို့အတွက်အ ဟာရဖြစ်စေသော ပရိုတင်းဓါတ်များစွာ ပါဝင်နေသေးတဲ့အတွက် မုန့်ပဲသွားရေစာအဖြစ်ပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြု၍ရ ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ နည်းပညာတွေအဆင့်မြင့်လာတာနဲ့အညီ ဘေးထွက်ပစ္စည်းကပါ တန်ဖိုးရှိနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာလည်းဖြန့်ဝေဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရတဲ့အတွက် ပြည်သူများ အနေနဲ့ ယခုလက်ရှိအချိန်မှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ ဆီအရောအနှောတွေကိုစိုးရိမ်မှု ကြီးစွာနဲ့ စားသုံးနေရတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့နှမ်းလှော်ဆီမွှေးအား မကြာခင်စိတ်ချယုံ ကြည်စွာနဲ့ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့နှမ်းလှော်ဆီမွှေးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ လုပ်ငန်းအဆင့် ဆင့်ကို ဗဟုသုတရရှိစေရေးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်းပြုပြင်ခြင်း(နှမ်းရိုင်းမှ - နှမ်းလှော်ခြင်းသို့ )
၁။ ဇကာချခြင်း ( Sieving )
၂။ ရေဖြင့် ဆေးကြောခြင်း ( washing)
၃။ အရွယ်အစားရွေးချယ်ခြင်း ( Sizing )
၄။ မီးဖြင့်လှော်ခြင်း ( Roasting by rotary Pot)
၅။ အအေးခံခြင်း ( Cooling )
၆။ Silo ဖြင့် ထပ်မံအအေးခံခြင်း
ကုန်ချောနှမ်းလှော်ဆီမွှေးထုတ်လုပ်ခြင်း (နှမ်းလှော်မှ နှမ်းလှော်ဆီမွှေးသို့)
၁။ ဆီညှစ်စက်ထဲသို့ နှမ်းလှော်5kg ထည့်သွင်းခြင်း။
၂။ ဆီညှစ်စက်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး 600 kgf/cm2အထိ အလိုအလျောက်ဖိညှစ်ခြင်း။
၃။ မိနစ် 30 ကြာမျှ အထက်ပါ ဖိအားဖြင့် ဆက်တိုက်ဖိညှစ်ခြင်း Pressure လျှော့သွားပါကအလိုအလျောက်
ထပ်မံ ဖိအားပေး၍ ဖိညှစ်ခြင်း။
၄။ အချိန်ပြည့်လျှင် ဖိအားလျှော့ချ၍ ဆီကြိတ်ပြီး နှမ်းဖတ်များကို ဖယ်ထုတ်ကာနှမ်းလှော်အသစ်များထည့်၍
၅။ ထွက်ရှိလာသော နှမ်းလှော်ဆီများကို ဆီခံပိုက်လိုင်းများမှ တဆင့် ယာယီ သိုလှောင်ကန်သို့ပို့ခြင်း။
၆။ ယာယီသိုလှောင်ကန်တွင် အနယ်ထိုင်စေပြီး အပေါ်ဆီများကို air Pump ဖြင့်Over Head Tank များသို့
၇။ Over Head Tank များအတွင်းရှိ လက်ကျန်ဆီအနှစ်များကို 15 ရက် တစ်ကြိမ် ဆီစစ်Filter စက်တွင်
၈။ အဆိုပါ သန့်စင်ပြီး နှမ်းလှော်ဆီမွှေးများအား Packing အခန်းတွင်း၌ သတ်မှတ်အလေးချိန်များဖြင့်
မြန်မာ့နှမ်းကို ကုန်ကြမ်းအတိုင်းတင်ပို့မှုအနေနဲ့ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ တန်ချိန်(၂၉၀၀၀)ကျော်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၅)သန်းကျော်၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ တန်ချိန်(၃၆၀၀၀)ကျော်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၈)သန်းကျော်နဲ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်(အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်အထိ)မှာ တန်ချိန်(၁၈၀၀၀)ကျော်၊ တန်ဖိုးအ မေရိကန်ဒေါ်လာ(၃၂)သန်းကျော် အသီးသီးတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အဓိကထားတင်ပို့ လျှက်ရှိပြီး စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုလည်း တင်ပို့လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းအတိုင်းတင်ပို့ခြင်းထက် ယခုလိုတန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ချောပစ္စည်းအဖြစ် မြန်မာ့ပို့ကုန်များအားထုတ်လုပ်တင်ပို့ကြ မယ်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်ရဲ့ပို့ကုန်ဝင်ငွေတန်ဖိုး ဆထက်ထမ်းပိုးတိုးပွား၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူလယ်သမားများ၊ စက်ရုံအတွက်အသုံးပြုသောလုပ်သားအင်အားများ၊ Exporter ကုမ္ပဏီများ အသီးသီးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေဖို့ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား…..
Export Mg Mg Lwin